Samanata ka Pailaharu - Binda Pandey | Thuprai
Samanata ka Pailaharu
समानताका पाइलाहरु: राजनितिक आन्दोलनको महिलावादी विस्लेषण
A feminist analysis of the political movement in Nepal by Dr. Binda Pandey.
सङ्गीत निर्देशकले वाद्यवादकलाई एकै दिशामा डोऱ्याएर मीठो धुन सिर्जना गरेझै समाजका सबै अवयव परिचालन गरेर लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको नेतृत्व गर्ने दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूको हो । उनीहरूले सही कदम चाले यो अभियान सफल हुन्छ, गल्ती गरे देश दशकौं पछि पर्छ । तसर्थ सामाजिक मुद्दाको अध्ययनका लागि पार्टीहरू केन्द्रबिन्दु हुन् ।अभियन्ता र प्राज्ञिक दुवै भूमिकामा रहेकी डा. बिन्दा पाण्डेले लेखेको यो कृतिमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता, लैङ्गिक समानताका सिद्धान्तको विवेचना र आन्दोलनको आलोचनात्मक समीक्षा गरिएको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको विहङ्गम चर्चा पनि गरिएको छ । अनि नयाँ चुनौतीको सविस्तार व्याख्या पनि । असङ्गतिका विषयमा लेखकले आफू सम्बद्ध पार्टीलाई पनि बाँकी छाडेकी छैनन् । तसर्थ पुस्तक यथार्थपरक छ ।
नुवाकोटको रावलस्वारामा जन्मिएकी बिन्दा पाण्डे जिफन्ट ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युटकी अध्यक्ष छिन् । २०६५ मा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहेकी पाण्डे २०७१ सालबाट पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छिन् । २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संस्थापक सदस्य र २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अध्यक्ष रहेकी उनी सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वनस्पतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी पाण्डेले २०५८ सालमा बैङ्ककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि स्नातकोत्तर गरिसकेकी छन् । २०७४ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायबाट उनले विमेन इम्पावरमेन्ट इन पोलिटिक्स विषयमा विद्यावारिधि गरेकी छन् ।
पाण्डेका नेपाली श्रमिक महिला आन्दोनलमा महिला सहभागिता (नेपाली र अङ्ग्रेजी), आजका युवा विद्यार्थी-भोलिका दक्ष जनशक्ति र विमेन इन नेपाली पोलिटिक्स कृति प्रकाशित छन् । महिला र श्रमिकसम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा समसामायिक राजनीतिक लेखरचना पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छन् ।